Marquette Park ရှိဖူဆယ်• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Marquette ပန်းခြံ စိန့်လူးဝစ်ရှိပထမဆုံးလူထုဖူဆယ်ကစားကွင်းဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်လူးဝစ် CITY SC, Dutchtown ပင်မလမ်းများ Marquette Park ၏မဟာမိတ်များ၊ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, STL လုပ်ပါ, Raineri ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, McConnell နှင့်အပေါင်းအသင်းများနှင့်အခြားအလှူရှင်များ၊ ငါတို့သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလူငယ်အားကစားကို Dutchtown ရပ်ကွက်သို့လူတိုင်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။ စီမံကိန်းအကြောင်းအားလုံးဖတ်ပါ.
ဖူဆယ် ချဲ့ထွင်ထားသောကွင်း၌ဘောလုံးနှင့်ဆင်တူသည်။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်အမေရိကတစ်ဝန်းလုံးတွင်လူကြိုက်များလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လျင်မြန်စွာကျယ်ပြန့်လာသည်။ အိမ်တွင်း၌လည်းကစားလေ့ရှိပြီးကစားပွဲကိုမာကျောသောမျက်နှာပြင်ရှိသေးငယ်သည့်ကစားကွက်နှင့်ကစားအားနည်းပြီးပိုမိုသေးငယ်ခိုင်မာသောဘောလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ဖူဆယ်ပွဲစဉ်များကိုကစားသမားငါး ဦး နှင့်တစ်ဖွဲ့စီကစားရပြီးပွဲချိန်မိနစ် ၂၀ တွင်နှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
ကွင်း၏အကန့်အသတ်များကြောင့်ဖူဆယ်သည်ဖန်တီးမှုနည်းဗျူဟာများ၊ နည်းစနစ်များ၊ ဘောလုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုအလေးပေးသည်။ လီယွန်နယ်မက်ဆီနှင့်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဲ့သို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်များစွာသည်ဖူဆယ်ကွင်း၌စတင်ခဲ့ကြသည်။ အရှိန်အဟုန်နှင့်မြင့်မားသောသွင်းဂိုးများ၊ ဖူဆယ်သည်ကွင်းသစ်သို့မပြောင်းရွှေ့မီကစားသမားသစ်များအတွက်အဖိုးတန်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းများအပြင်အတွေ့အကြုံရှိသောဘောလုံးသမားများအတွက်လက်မှုပညာကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ရိုးရှင်း! ဘောလုံးတစ်လုံးယူပါ၊ သူငယ်ချင်းအချို့ကိုဖမ်းပါ၊ ဘောလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပါ၊ သွားပါ။ စည်းမျဉ်းများသည်ဘောလုံးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ဂိုးသမားအပါအ ၀ င်အသင်းတစ်သင်းမှကစားသမားငါး ဦး
ပိုမိုသေးငယ်။ ပိုမိုခက်ခဲသောအရွယ်အစား ၄ ဘောလုံး (သို့မဟုတ် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်အရွယ်အစား ၃) ကိုသုံးပါ။
တစ်ခုစီအတွက်မိနစ် ၂၀ ကြာသည်
Marquette Park ဖူဆယ်သတင်း၌
St. Louis CITY SC နှင့်စတင်ပါ
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်စနေနေ့၊ Dutchtown Main Streets ကိုဗိုလ်မှူးနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် လိဂ်ဘောလုံးအသင်းစိန့်လူးဝစ် CITY SC Marquette Park ၌ဖူဆယ်ကွင်းသစ်ကြီးဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပရန်နှင့်အခြားရပ်ရွာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများစွာ။ ဘောလုံးအသင်းသည်အနီးအနားရှိကလေးများအားဘောလုံးများပေးခဲ့သည် Umoja ဘောလုံး ကွင်းသစ်တွင်အမြန်ပြပွဲကစားနည်းများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ် Post ကို-Dispatch စိန့်လူးဝစ်ဒေသတစ်ဝှမ်းမှ Dutchtown အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဘောလုံးဝါသနာအိုးဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်သောပွဲအတွက်နှင့်အခြားသတင်းဌာနများသည်လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါ Read My Postsဒီမှာဆောင်းပါးမရ။ ပွဲစတင်သည့်နေရာမှနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံများကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် DutchtownSTL Flickr စာမျက်နှာ.
ဤစာမျက်နှာကိုမှတ်သားပါ (dutchtownstl.org/futsalMarquette Park ဖူဆယ်ကွင်း၌နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်) ပုံမှန်ပစ်ကပ်ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်သစ်များကိုမကြာမီကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ တစ်ခုလည်းရှိပါတယ် Marquette Park Futsal အုပ်စု ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာသင်အမြဲ up to date ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 27th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette Park ရှိဖူဆယ်